ADY AMIN’NY COVID-19 ETO MAHAJANGA : Nomena tamby manokana ireo mpitsabo misehatra amin’ny valanaretina
Fitaovana fanodinana oksizena na "Concentrateurs d’oxygène" miisa folo sy teste Pcr, fitaovana fitarafana nomerika na “radiologie numérique” ary tambavy Cvo no nomena ny Faritra Boeny avy tamin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, nandritra ny fitsidihana nataony teto Mahajanga. 28 juillet 2020
Ny tolakandron’ny alahady 26 jolay taorian’ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny Governoran’ ny Faritra Boeny no nanolaran’ny Filoham-pirenena izany, teny amin’ny hopitaly CHU Mahavoky Atsimo na ny Manara-penitra. Ankoatra izay dia nitondra tamby manokana ho an’ireo mpitsabo misehatra amin’ny ady atao amin’ity Covid-19 eto Mahajanga ity ny Filoha, ka ny faran’ny volana aogositra ho avy izao no hanomboka hisitraka isam-bolana izany ireo mpitsabo amin’ireo hopitaly roa lehibe eto Mahajanga dia ny CHU PZaGa sy ny Manara-penitra Mahavoky atsimo. Hanomboka hisy ny fitiliana faobe atao eto Mahajanga taorian’ny nahazoana ny fitaovana PCR nomen’ny Filoha ity.
Marihina fa 27 ny isan’ireo mararin’ny Covid-19 ao amin’ny hopitaly CHU Mahavoky atsimo hatramin’ity ora nanoratanay ny vaovao taorian’ny fitsidihana naton’ny Filoham-pirenena teny an-toerana, ny alahady tolakandro teo ity, raha afaka mandray marary hatramin’ny 73 ny hopitaly.
Ilay tambavy Cvo indray dia hozaraina isam-pokontany, ka ny Governora no nomena fahefana hitsinjara izany amin’ny alalan’ny lisitra avy amin’ireo sefom-pokontany, hoy ny Filoha. Tamin’izao fitsidihana izao dia niara-dalana tamin’ny Filoham-pirenena ny Minisitry ny atitany sy fitsinjaram-pahefana ary ny Minisitry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa, izay mbola nijanona namita iraka hiadiana amin’ny Covid-19 eto Boeny.
“Tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe” FIKASANA HANONGAM-PANJAKANA, FANAKORONTANA … (468) 14 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (159) 13 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (121) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (102) 13 janvier 2021 Nakorain’ireo mpijery ny Ben’ny tanànan’Antsiranana FANDRAVANA LALAO (74) 19 janvier 2021 Milaza hanova paikady amin’ny fanakorontanana ny firenena RODOBEN’NY MPANOHITRA (71) 14 janvier 2021